यी एसपी जो मध्यराती पेस्तोलसहित कांग्रेस सभापती निवास छिरे र यतिसम्म गरे !
प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार पाण्डेलाई केन्द्रमा तानेर उक्त ठाउँमा एसपी अर्जुन तिम्सिनालाई पठाइएको छ। सरूवा भएपछि पाण्डेले कांग्रेस सिराहा सभापति रामचन्द्र यादवलाई दुर्व्यवहार गरेको स्रोतको दाबी छ।
पुस १९, २०७८ ३:२४
नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं। सिराहाका प्रहरी उपरीक्षक हीराबहादुर पाण्डेलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले हेडक्वार्टरमा तानेको छ। जिल्लामा सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले प्रदर्शन र हड्ताल गरिरहेका बेला प्रहरी प्रमुख पाण्डेलाई केन्द्रमा तानिएको छ।
सभापति यादवले सरूवा गरिदिने चेतावनी दिएको भन्दै एसपी पाण्डे गए राति उनको घरमा गएको यादव पक्षको दाबी छ।
‘एसपी पाण्डे राति सभापति यादवको घरमा आउनुभएको थियो,’ यादवका सहयोगीले भने, ‘यो घटनाबारे जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा अहिले प्रदेश २ का प्रहरी प्रमुखसहित छलफल भइरहेको छ।’
सिराहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लालबाबु कवारीले एसपी पाण्डेको सरूवा भएको बताए। ‘उहाँको सरूवा भएको हो। अरू के के भयो भन्नेबारे हामी छानबिन गर्दैछौं,’ उनले भने।
गए राति एसपी पाण्डे कांग्रेस सभापति यादवको घर गएरनगएको विषयबारे भने आफूलाई थाहा नभएको उनले बताए। सरूवा भएपछि पाण्डे कांग्रेस सभापति यादवको घरमा राति पेस्तोलसहित पुगेको यादव पक्षको दाबी छ।
६५ बुँदामा के लेखेर पठायो सरकारी वकिल कार्यालयले प्रहरीलाई?
बालुवाटारस्थित ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले सोमबार प्रहरीमै फर्काएको छ।
बौद्ध घटनाः प्रहरीको भनाइ आपसी झगडाकै कारण अनिश र युसिनाको ज्यान गएको
अनिश र युसिना पब्जी खेल्थे। खेलिरहँदा उनीहरु हान्–हान् र मार मार भन्दै हल्ला गर्ने भएकाले शारदालाई त्यसको बानी लागिसकेको थियो।
देशभरका प्रहरीहरुका लागि खुसीको खबर, तल्लो दर्जाकालाई सबैभन्दा ठूलो फाइदा
प्रहरीमा १२ वर्षमा बढुवा हुने अवधि घटाएर ८ वर्षमा झारिने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सम्म १२ वर्ष पुगेपछि बढुवा हुने अवधिलाई घटाएर ८ वर्ष बनाउने निर्णय गरेको हो ।
नेपाल प्रहरीले माग्यो १४ अर्ब बजेट: निर्वाचनका लागि ९९ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने
निर्वाचनको तयारीका लागि नेपाल प्रहरीले १४ सय गाडी मागेको छ ।
सिरहामा बिहानैदेखि निषेधाज्ञा गरिएको छ |
प्रमुख जिल्ला अधिकारी लालबाबु कवारीले पुस १३ र १४ गते निषेधाज्ञा गरिएको बताए। बिहान ५ बजेदेखि बेलुकी ७ बजेसम्म भेला हुन र बाहिर हिँडडुल गर्न रोक लगाइएको छ।
कैदी भगाउन सहयोग गर्नेजेलर युवराज परियार पक्राउ
परियारले आफ्नो प्रेमिकालाई प्रहरी जवान चौधरीको साथमा छुट्टै कोठामा पठाएका थिए भने आफू अर्को महिलाको साथमा छुट्टै कोठामा गएका थिए ।